Turkey - BBC News Somali
Posted at 15:54 21 Sebtembar 202115:54 21 Sebtembar 2021
Emine Erdogan oo ah marwada koowaad ee dalka Turkiga ayaa la filayaa in ay Xarunta Qaramada Midoobay ay ku soo bandhigto buug ay ka qortay booqashooyin ay ku tagtay dalal ay ka mid tahay Soomaaliya.
Posted at 6:49 16 Sebtembar 20216:49 16 Sebtembar 2021
Dalka Turkiga ayaa waxaa uu ka wood badan yahay dalal uu kamid yahay Jarmalka
Posted at 16:06 30 Agoosto 202116:06 30 Agoosto 2021
Erdogan oo soo bandhigay diyaarad dagaal oo casri ah oo uu dalkiisa sameystay
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa soo bandhigay diyaaradaha aanan duuliyaha saarneyn ee Drone-ka oo hubeysan, taas oo lagu sameeyay gudaha dalkaas.
Posted at 13:58 21 Agoosto 202113:58 21 Agoosto 2021
Muxuu Giriigga darbi uga dhisayaa xadkiisa Turkiga?
Dayr 40km ah oo xadka dhulka ah oo uu Giriiggu Turkiga la wadaago ayuu Griiggu dhisanayaa xilli laga digayo in muhaajiriin badan ay ka soo tallaabi doonaan waddanka Afgaanistaan.
Posted at 15:36 20 Agoosto 202115:36 20 Agoosto 2021
Sida Soomaaliya ay ugu noqotay Turkiga albaabkii uu ka galayay Afrika
Toban sano kahor, markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, uu cagta dhigay Muqdisho, isagoo ku tegay booqashadii ugu sarreysay ee hoggaamiye uu ku tago Soomaaliya tan iyo burburkii ayaa waxay taasi indhaha caalamka u soo jiidday xaaladda daran ee bani'aadannimo ee ka jirtay dalkaas.
Posted at 17:48 19 Agoosto 202117:48 19 Agoosto 2021
Maxaa ka dhashay booqashadii Erdogan ee Soomaaliya 10 sano ka hor maanta oo kale?
Maanta oo kale 10 sanadood ka hor madaxweynaha Turkiga Reccep Tayib Erdogan ayaa noqday hogaamiyhii ugu horreeyay ee booqasho cad Soomaaliya ku taga, kaddib dagaalladii sokeeye ee dalka halakeeyay.
Posted at 8:12 19 Agoosto 20218:12 19 Agoosto 2021
Turkiga ma wuxuu doonayaa in uu dhexdhexaadiyo Abiy iyo TPLF?
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa Arbacadii ballanqaaday inuu gacan ka geysanayo dhexdhexaadinta soo afjaridda dagaalka ka socda gobolka Tigray ee Itoobiya, isagoo wacad ku maray inuu ilaalin doono "hufnaanta" .
Posted at 16:12 13 Agoosto 202116:12 13 Agoosto 2021
Wasiirka Gaashaandhigga ee Turkiga, Hulusi Aker ayaa Arbacadii sheegay in ay faa'iido weyn ku jirto xaqiijinta in uu garoonka Kabul sii furnaado, go'aanno arrintaas la xiriirana la gaari doono maalmaha soo socda.
Posted at 5:43 2 Agoosto 20215:43 2 Agoosto 2021
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu ka shaqeynayo xoojinta xiriirka Ruushka iyo dalalka Islaamka ee ku horumaray dhaqaalaha.
Posted at 10:57 29 Luulyo 202110:57 29 Luulyo 2021
Bog 1 of 17